02/22/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
မြန်မာစကား၊ ရခိုင်စကား မတတ်တဲ့ စိမ့်ဝင် ဘင်္ဂလီတွေက ဒီမှာမွေးတယ် ပြောရုံနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ (ကမန်လို့လဲ မလိမ်ပါနဲ့။) ဘင်္ဂလီက ဘင်္ဂလီ ပါဘဲ။ ("""---------- လ၀ကက စစ်လိုက်တော့ အဖေ ကလည်း ဘင်္ဂါလီ၊ အမေ ကလည်း ဘင်္ဂါလီ၊ သားသမီး ကျမှ ရိုဟင်ဂျာဖြစ် ချင်တာက ဆန္ဒစွဲတွေဖြစ် ပါတယ်”"" ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ဆိုသည်။
"NLD ဆိုတာ ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်တော့ဘူး.. အခု မွတ်ဒေါင်း ဖြစ်နေပြီ" ~ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
"NLD ဆိုတာ ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်တော့ဘူး.. အခု မွတ်ဒေါင်း ဖြစ်နေပြီ" ဟု ဆရာတော် ဦးဝီရသူ က မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သမ္မတ လုပ်မည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာ ရခိုင်အရေးတွင် စကားတစ်ခွန်း မထွက်ခဲ့ကြောင်း၊ မိတ္ထီလာ NLD ပါတီတွင် မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့ ရုံးထိုင်နေကြကြောင်း၊ မြို့လှ NLD အာဇာနည်နေ့ တွင် ဆွမ်းကပ်ခွင့် မရခဲ့ကြောင်း၊ မော်လမြိုင် ရာဇာမင်းကားလိုင်း ကထိန်ခင်းလို့ မရခဲ့ကြောင်း၊ NLD ပါတီမှာ ခွပ်ဒေါင်း မဟုတ်တော့ပဲ မွတ်ဒေါင်းတွေ ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် NLD ပါတီ အာဏာရလာပါက အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။
အင်တာနက် ဘလော့များပ်ါတွင် ရေးသားထားသော ဦးသန်းရွှေ၊ ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးရွှေမန်း နှင့် အခြားဗိုလ်ချုပ်များ မကောင်းကြောင်း အတင်းများအား NLD ညီလာခံတွင် စာအုပ်ထုတ်ဝေ ရောင်းချ
အစိုးရဘက်မှ သက်တမ်း ၂ နှစ် ရှိသည့်တိုင် နောက်ကြောင်း ပြန် လှည့်မည့် အရိပ်အယောင် မတွေ့ရ သော်လည်း NLD ပါတီဖက်မှ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိုသည့် လုပ်ဆောင် မှုများ ကို ပထမဆုံး ပါတီညီ လာခံ မပြုလုပ်ခင်မှာပဲ လုပ်ဆောင် လာသည်ကို တွေ့လာရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းအဆောက်အအုံကိုပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချမည်ဆိုခြင်းမှာ လုံးဝမဟုတ်မှန်ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန် အသင်း အဆောက် အအုံကို ပုဂ္ဂလိက သို့ လွှဲပြောင်း ရောင်းချမည် ဆိုခြင်းမှာ လုံးဝ မဟုတ် မှန်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန် များ အသင်း အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြင့်သောင်းက ငြင်းဆို လိုက်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပိုင် ပြတိုက်များ ရက်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်မည်
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ပြတိုက်များကို ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရက်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသားပြတိုက်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောဆိုသည်။
ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် ပြတိုက်ပေါင်း ၃၀ ရှိရာ ယခင်က သတ်မှတ်ထားသည့် ပိတ်ရက်များအနက် အင်္ဂါနေ့ ကို မပိတ်တော့ဘဲ ဖွင့်လှစ်ပေးထားမည် ဖြစ်သည်။
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under မှုခင်း | No comments
မြန်မာနိုင်ငံက တင်သွင်းလာသော တာကာ တစ်ကု ဋေဖိုးရှိ ယာဘာဆေးပြားများကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ကမ်းခြေ စောင့် တပ်ဖွဲ့က မြန်မာ နယ်စပ် အနီးတွင် ဖမ်းဆီး လိုက်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်းက မြန်မာဘက်က ၀င်လာသော ငါးဖမ်း စက်လှေ တစ်စီးကို သတင်းအရ ရှာဖွေ စစ်ဆေး စဉ် စက်လှေပေါ်မှ ပလစတစ်အိတ်ဖြင့် ထုတ်ထားသော ယာဘားဆေးပြား ၁၉၈၁၀ ကို ဖမ်းဆီးရမိသည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under သတင်းများ | No comments
သီရိလင်္ကာ ရေတပ်က ကယ်ဆယ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၂ ယောက် သည် မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရန် ငြင်းဆိုကြောင်း သီရိလင်္ကာရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ရဲအဖွဲ့အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင် ရိုဟင်ဂျာများက သူတို့ဟာ ပြန်ဖို့ မျှော်လင့်စရာ မရှိကြောင်း
အစ္စလ်ာမစ် ဘာသာရေးထဲ လူငယ်တွေ အချစ်ရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ဆွဲသွင်းခံနေရတာ ဘယ်လောက် များပြီလဲ(ဖြစ်ရပ်မှန်)
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under မြန်မာသတင်းများ,သတင်းများ | No comments
အော် မိုက်လိုက်တဲ. ငါ.နှမရယ် အမျိုးဖျက်သွားပြီးပဲ ဒူနဲ.မျက်ရေသုတ်ရမှ ငါ.နှမငယ်လေး နောင်တရ မှာလား လူဆိုတဲ. အဓိပ္ပါယ် ဘာလဲဆိုတာတောင် မသိရှာတော.ဘူးလာကွယ်။။။။။။။။
ကောင်မလေးရဲ့ နာမည်က ရွှန်းလဲ့ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးက kk-အုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ပါတယ်။ မြင်းမူမြို့၊ ဗေဒါလမ်း၊ အသောကရပ်မှာ နေပါတယ်။ မူဆလင် ထက်ကိုလတ်ရဲ့ အဖေက ဦးသိန်းကိုလတ် (မူဆလင် )+ ဒေါ်စောနု သန်း(ဗမာ) ဖြစ်ပြီး၊ တစ်မိသားစုလုံး အစ္စလာမ် ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။
ဦးသိန်းကို လတ်က စက်ဘီးပြင် လုပ်ငန်း၊ ဒေါ်စောနု သန်း ကကြာဇံ ဟင်းရောင်းကာ မြင်းမူမြို့၊ မြစ်ပေါက်လမ်း၊ အသောကရပ်မှာ နေပါတယ်။ ဒေါ်စောနုသန်း ငယ်စဉ်ကလည်း ခိုးရာလိုက်ပြေးခဲ့ပြီး ကလေး တစ်ယောက် ရမှ မြင်းမူ ပြန်ရောက် လာလို့ မိဘများက ဘာမျှ မတတ် နိုင်တော့ပါ။ ဒီနည်းကို ဒေါ်စော နုသန်းက ဆက်လက် သုံးစွဲ ခိုင်းခဲ့တာပါ။
“ပိုက်ဆံတွေ ပါသွား တာပဲ၊ ကလေးရမှ ပြန်ခဲ့၊ သတ်မ ပစ်ပါဘူး၊ ခုတော့ ဘာတတ် နိုင်သေးလဲ”ဟု ကြာဇံဟင်း ရောင်းရင်း ဈေးထဲမှာ ပြောဆိုနေကြောင်း သိရပါတယ်။
ကောင်မလေးနှင့်အတူ ပါသွားတာက ငါးဆယ့်ကိုးသိန်းကျော်ရှိပြီး ကောင်မလေးနှင့် ကုလား ထက်ကိုလတ်ကို မုံရွာမြို့နယ်၊ တောင်ပုံရွာမှာ ဖမ်းမိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲစခန်းရောက်ခါစက- ဧည့်ခန်းထဲမှာ ခေါ်တွေ့ နေကျ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလားက ထွက်မတွေ့ဖို့ ပြောမှ ကောင်မလေးက ထွက်မတွေ့တော့တာပါ။ မိခင်ဖြစ် သူက မနေနိုင်လို့ အချုပ်ခန်း ထဲထိ သွားတွေ့တာကို ဖခင်ဖြစ်သူက မိခင်ကို ဆူပူတာကြောင့် မိခင်ကြီး ခမျာ သတိလစ်မေ့မျောသွားပြီး ထိုင်ခုံပေါ်မှ ပြုတ်ကျလဲ သွားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ ထက်ကိုလတ်ရဲ့ ပေးစာများကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
သည်ပုံ သည်နည်း သည် ခရီး ဘယ် ပုံဖြင့် နီးမယ်ကြံ
တစ်ခါ တစ်ခါ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငယ်ငယ်တုန်းက ရွှေထီး ဆောင်း ခဲ့ဖူးကြောင်းတွေကို ပြောမကုန် လွမ်းမ ကုန်အောင် ရှိနေ တတ်ကြသည်။ မြန်မာပြည်ကြီး မည်မျှလောက် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခဲ့ဖူးသည့်အကြောင်း၊ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်ကြီးက အာရှမှာ ဘယ်သို့..၊ မြန်မာ့ဆန်က ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ ဘယ်ချမ်း သာ..၊ မြန်မာ့ ကျွန်းရွှေဝါ ကဘယ့်နှယ်..၊ မြန်မာ့ကျောက် သံပတ္တမြားက ဘယ်ပုံ.. စသည်ဖြင့် ရုပ်ဝတ္ထုတွေ အကြောင်း တမ်းတ လွမ်းမောလို့ မဆုံးနိုင်ခဲ့။ တွေးမိတိုင်း လွမ်းလောက်စရာဖြင့်တော့လည်း တကယ်ကောင်းပါသည်။
မည်မျှပင်အင်အားကြီးမားတဲ့ပါတီ ကြီးတွေ၏ ရိုက် ခတ်မှု လှိုင်းတန်ခိုးတွေ ပြင်းထန်ပါစေ လှိုင်းပုတ်လို့ ကမ်းပြို “မသွားသောလူကတော့ ဒီမိုကရေစီပါတီ သစ် ဦးသိန်းညွန့်ပဲဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းညွန့် ကို ပုဂိ်္ဂုလ်ရေး ရင်းနှီးမှုပြင်ပမှာလည်း တွေ့ဖူးဆုံဖူးခဲ့သည်မရှိ၊ ဘာကြောင့် ဦး သိန်းညွန့်ကို အကောင်း တွေ ရေးခဲ့ရ သလဲ လို့မေးရင် စာရေးသူဟာ စာနယ်ဇင်း သမားတစ် ယောက် ပါ။
မရိုးမသား သဘောထားနဲ့ အချောင်နိုက်ချင်တဲ့ ( ဗ.က.သ ) အမည်ခံ လုပ်စားအဖွဲ့ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများ နှစ်ဖွဲ့ကွဲ
ခရီးစဉ်အတွင်း ဦးအောင်မြင့်မှ မြို့အ၀င် များတွင် ဗကသအလံ လွှင့်ထူခြင်း၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ပုံစံ သရုပ်ဖော်သည့် အနေဖြင့် သံခြေချင်း ၀တ်၍ မြို့များသို့ ၀င်ရောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ကိုရန်နိုင် ထွန်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ ပြင်းထန် စွာကန့် ကွက်ခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under ဓါတ်ပုံသတင်း |2comments
Eleven, The Voice,7Day, ဧရာဝတီ ကဲ့သို့ ကျင့်ဝတ်မညီသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အခြေစိုက် မြန်မာ မီဒီယာ များ အား ဆက်တိုက် ဆုံးမနေသဖြင့် BHG အား လူထုမှ ပိုမိုလေးစား ထောက်ခံလာ
Eleven, The Voice, ဧရာဝတီ ကဲ့သို့ ကျင့်ဝတ်မညီသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အခြေစိုက် မြန်မာ မီဒီယာ များ အား ဆက်တိုက် ဆုံးမနေသဖြင့် BHG အား လူထုမှ ပိုမိုလေးစား ထောက်ခံလာ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အစိုးရသစ်တက်လာပြီးနောက် မီဒီယာများအား စိစစ်မှုမရှိပဲ ထုတ်ဝေခွင့်ပေးပြီးနောက် မီဒီယာများမှ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲ့ ရေးသားမှုများ ဆက်တိုက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံး ဂျာနယ်များမှာ Weekly Eleven, The Voice Weekly နှင့်7Day News ဂျာနယ်တို့ဖြစ်ပြီး ပြည်ပအခြေစိုက် နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ပေးကမ်း ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ရပ်တည်နေသော ဧရာဝတီ တို့ ပါဝင်သည်။
ပါတီဝင်အချင်းချင်း ကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှ ကျင်းပရန်ကြိုးစားသဖြင့် NLD ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဌ အရိုက်ခံရ
၁၀-၂-၂၀၁၃ရက်နေ့ ည၁၀-၀၀နာရီကျော်ခန့်တွင် ရိုက်မှုဖြစ် ပွားခဲ့ပါ သည်။
၂၇လမ်း၊ ၆၉ လမ်းထောင့် ယခင်ထွန်းလှ ဟိုတယ်၊ ယခုမြမန္တလာ ဟိုတယ်ရှေ့ တွင် ဆိုင်ကယ် စီးလာေ သာ "အမျိုး သား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် စိတ္တရမဟီ ရပ်ကွက် ညီလာခံ ကျင်းပရေးကော် မရှင် ဥက္ကဌ ဒေါက် တာေ ဇယျာေ နဝင်း" အား အမည် မသိ ဆိုင်ကယ် သမား(၃)ယောက်မှ နောက်မှ ဝင်ရိုက်ခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစာအုပ် NLD ညီလာခံမှာ ရောင်းချ
တောင်ကြီးမြို့ တွင် ယမန်နေ့က ကျင်းပသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရှမ်းပြည် နယ် ညီလာ ခံတွင် မိတ္တူကူးထားသည့် စာအုပ် အများအပြား ရောင်းချခဲ့ရာ ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး အကြောင်း ရေးသား ထားသည့် စာအုပ်လည်း ပါဝင် သည်ကို တွေ့ရသည်။
RFA အသံလွှင့်ဌာနက အပတ်စဉ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် အောင် သူငြိမ်း၏ ဆောင်းပါးများကို စုစည်း ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး "ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မင်းဆိုးမင်းညစ်တဦးကို မျက်နှာဖုံး ခွာကြည့်ခြင်း" ဟု အဆိုပါ မိတ္တူစာအုပ်ကို အမည်ပေးထားသည်။
ရန်ကြီးအောင်မှန်လုံလေအိတ် EXPRESS အမြန်ယာဉ်ကားချောက်ထဲထိုးကျ
မန္တလေးမှ တောင်ကြီးသို့ တက်လာသည့် ခရီးသည်တင် ရန်ကြီးအောင် မှန်လုံလေအိတ် EXPRESS အမြန် ယာဉ် ကားကြီးသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ရက်နေ့ ၊နံနက်၎း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဟဲဟိုးမြို့ အကျော် ၊ တောင် လေးလုံး မရောက်မီ တီကောင်တောင် အကွေ့တွင် ကား ဘရိတ် ပေါက်ပြီး တီကောင် တောင်အောက်ရှိ
ချောက်ကမ်းပါး အတွင်းသို့ ကားတစ်စီးလုံး ထိုးကျ သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ် ကြောင့် ယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည် ၁၇ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာများ ရရှိပြီး တော င်ကြီးမြို့၊ စ၀်စံထွန်း ဆေးရုံ အရေးပေါ် ဌာနတွင် တင်ဆောင် ကုသ ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အပူရှိန်ကြောင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောထိခိုက်နိုင်၍ အထူးဂရုပြုနေထိုင်သင့်
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အပူချိန် မြင့်မားနေသဖြင့် အဆိုပါ အပူရှိန်ကြောင့် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောကို ထိခိုက်လာနိုင် သည်အထိ အသက်အန္တရာယ် ရှိလာနိုင်သည့်အတွက် ဂရုပြုသင့်ကြောင်း ဒေါက်တာ မြင့်ဦးက ဆိုသည်။
ပူအိုက်သည့် ရာသီကြောင့် အသက်ရှုမြန်လာခြင်း၊ အသက်ရှု ကြပ် လာခြင်း၊ အားအင်ချိနဲ့ကာ မူးလဲနိုင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူရှိန် အလွန် အကျွံ တက်လာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာများဖြစ်ကာ ဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြောကိုပါ ထိခိုက်လာ နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့ တွင် အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်ကို တော်လှန်ရေး ကောင်စီ အစိုးရ က ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုကြေညာချက် အရ ထောင်အသီးသီးမှ အကျဉ်းသား အချုပ် သမားများ လွတ်ကြရာ ရန်ကုန် ဗဟိုစံပြအကျဉ်းထောင်ကြီးမှ လွတ်မည့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအကျဉ်းသား အချုပ်သား (၇၅၃)ယောက်တို့ကို ဧပြီလ (၅)ရက် နံနက်(၉)နာရီတွင် တော်လှန် ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း က အကျဉ်းထောင်အတွင်း ၀င်ရောက် ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
သဘာဝအတိုင်း အစိမ်းစားခြင်းဖြင့် ကျန်းမာ နုပျိုစေမည့် အစားအစာများ
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ချက်ပြုတ် ခြင်းဟာ အစားအစာ ထဲမှာ ပါတဲ့ တချို့ အာဟာရ ဓာတ်တွေကို ဆုံးရှုံး စေတာကြောင့် အစိမ်းစားရင် အစားအစာ ထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တု ဓာတ်တွေကို ပိုမို ရရှိ စေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစားအစာတိုင်း ကိုတော့ အစိမ်းစားလို့ မရပါဘူး။ အသား၊ ငါးလိုမျိုး အစာတွေ မှာတော့ ရောဂါပိုးတွေ ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သေချာ ကျက်အောင် ချက်ပြုတ် ပြီးမှ စားသင့် ပါတယ်။
နယ်သာလန်ရောက် အိန္ဒိယပြန် ကရင်ရဲဘော် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ နယ်သာလန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိ သွားတဲ့ ရခိုင်- ကရင် ရဲဘော် ၂၉ ဦးထဲက ကရင်ရဲဘော် တစ်ဦးဟာ ဒီလ ၁၉ ရက်နေ့က မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
မိမိကိုိယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ကရင် ရဲဘော်ဟာ ရွှေလာ ( Shwe Lar) ဆိုသူ ဖြစ်ပြီး နယ်သာလန် နိုင်ငံ Delfsen မှာနေထိုင် နေသူ ဖြစ်ပါ တယ်။
Android လိုပဲ ကွန်ပြူတာမှာကစားလို့ရတဲ့ သစ်သီးဖြတ်တဲ့ Fruit Ninja ဂိမ်း
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Android လိုပဲ ကွန်ပြူတာမှာ သစ်သီးဖြတ်တဲ့ Fruit Ninja ဂိမ်း ကိုကစားချင်တယ်ဆိုရင်
Portable လေးဆိုတော့ အလုပ် သိပ်မရှုပ်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့ တခု့တော့ လုပ်ပေးရပါမယ်
အခု့ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ fruit ninja rar ဖိုင်လေးကို
HDD window ထဲမှာသွားထည့်ပေးရပါမယ်
C ဆိုတဲ့ဖိုင်ထဲမှာ program file ဆိုတာလေး၇ှိပါတယ်
အဲဒီ ထဲမှာ new folder တခု့ လုပ်လိုက်ပါ
အခု့နက ဒေါင်းထားတဲ့ fruit ninja rar လေးကို copy ယူပြီးတော့
Android အတွက် အင်တာနက် speed မြှင့်တဲ့ ဆော့ဝဲ
မိုဘိုင်းဖုန်း Android အတွက် အင်တာနက် speed မြှင့်တဲ့ ဆော့ဝဲ လေးပါ
အသုံးပြု့ချင်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူသွားပြီး အသုံးပြု့နိူင်ပါတယ်
mega | mediafire | zippyshare | box | sharebeast
Credit to MK Mgmg(COA)
ပြန်ကြားရေး ဒုတယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် နှင့် Google မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Posted by drmyochit Friday, February 22, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင်ငံ တွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ ဒုက္ခသည်တွေကို နေရပ်ရင်း ပြန်ပို့ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက် မြန်မာ ဘက်က ကော်မတီ ဖွဲ့ထားတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည် တွေ နေရပ် ရင်းပြန်ပို့ဖို့ ကိစ္စကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်က လည်း လိုလားဆောင်ရွက်နေတဲ့ အကြောင်း တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံ တက်ခ် ခရိုင်တွင်းက ခရိုင်ဝန်က မဲဆောက်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တခုမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဆိုတော့ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်က မြန်မာ ဒုက္ခသည်တွေ၊ နေရပ်ရင်းပြန်ဖို့ နီးနေ ပါပြီလား၊ ဒီလိုပြန်သွားမယ် ဆိုရင်ရော ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါ့မလားဆိုတာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ မအေးမာက အကြောင်းစုံပြောပြပါမယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တွင်းမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို နေရပ်ရင်းပြန်ဖို့အတွက် လိုလားနေတဲ့ အကြောင်း ကို ထိုင်းနိုင်ငံ တက်ခ်ခရိုင်ဝန် မစ္စတာ ဆူရိယ ပရာဆန်ဘန်ဒစ်က သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေဆုံချိန်မှာ အခုလို ပြောသွားတာပါ။
သူပြောသွား တာကတော့ ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်နေရာချထားဖို့ ၊ အဲဒီနေရာကို ဒုက္ခသည် ကိုယ်စား လှယ်တွေ အရင်သွားပြီး စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ မြန်မာဘက် ကလည်း ကော်မတီ ဖွဲ့ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ လေ့လာ ချက်တွေ အရတော့ ဒုက္ခသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ကိုယ့်မြေ ကိုယ်ပြန်ချင်တယ်။ ၊ အများစုကတော့ တတိယနိုင်ငံ သွားချင်ကြတယ်။ တချို့က ထိုင်းမှာပဲ ဆက်နေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ကျပြန်တော့လည်း နိုင်ငံထဲကို တရားမဝင် ခိုးဝင်တဲ့ပြဿနာ ၊ တရားမဝင်အလုပ်ဝင်လုပ်တာ ၊ စိုကိပျိုးရေးဝင်လုပ်တာ ၊ သစ်ပင်တွေ ခိုးခုတ်ပြီး သစ်တောတွေ ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းချင်တယ် ၊ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ၊ ဒီ ၂ နှစ် ၃ နှစ်ထဲမှာ အမြန်ပြန်ပို့ချင်ပါတယ် ဆိုပြီး ပြောသွားတာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာ ဒုက္ခသည် တစ်သိန်းကျော်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတော့ အခြေအနေတည်ငြိမ်ရင် နေရပ်ရင်းကိုပြန်လိုတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရှိနေသလို တတိယနိုင်ငံကို ထွက်ခွါလိုတဲ့ ဒုက္ခသည် အရေအတွက်က ပိုများနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကတော့ ဒုက္ခသည်အများစုကို လက်ခံခေါ် ယူပေးမယ့် အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေကို ခေါ်ယူတဲ့ အစီအစဉ်ကို ရပ်နားတော့ မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့်လည်း ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့
စိုးရိမ် မူတွေ ရှိနေခဲ့တာပါ။
အကျိုးဆောင်တွေ သိမ်းထားတဲ့ ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း၊ အ၀ယ်၊ အငှား ကဏ္ဍမှာ အကျိုးဆောင်တွေ၊ အရပ်ပွဲစားတွေက
အဓိက အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေ ပါတယ်။ အိမ်ငှားဖို့ ၀ယ်ဖို့အတွက် သူတို့နဲ့ မလွတ်ကင်းနိုင်ပါဘူး။
ကြားခံ အကျိုးဆောင်တွေ မပါဘဲ ဖြစ်မြောက်တယ် ဆိုတာက ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်မှာ ရှားပါး လာပါပြီ။
အိမ် ခြံ မြေ ရောင်း/၀ယ်/ငှားရာမှာ ကြားခံ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ဖို့ ရုံးခန်းတွေ ဘာတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတာကို အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းလို့ အမည်တပ်ပါတယ်။
သူတို့က ပွဲစားလုပ်ငန်း ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ကို ပွဲစားလို့ ခေါ်ရင် အများအားဖြင့် မကြိုက်ကြဘူးလို့ သူတို့နဲ့ နီးစပ်သူတွေဆီက သိရပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း မူးယစ် ဆေးဝါး သယ်ဆောင်သူ အမျိုး သမီး နှစ်ဦးကို ဖမ်းမိ
လားရှိုးမြို့တွင် ယမန်နေ့ ညနေ ၅း၄၅နာရီ အချိန်၌ လားရှိုး မူးယစ် (အထူး) အဖွဲ့မှ မြို့တွင်း မူးယစ် ဆေးဝါး တားဆီးရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေစဉ် ကြိုတင် သတင်း ရရှိမှု အရ လားရှိုးမြို့ မန်ဆူ ကားဝင်း အတွင်း ရှိ ကြယ်တံခွန် ကားဂိတ် တွင်မသင်္ကာသူ အမျိုး သမီး နှစ်ဦးအား စစ်ဆေးကာ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ သည်ဟု သိရ သည်။
ကမ္ဘာ တစ်ဝန်း နိုင်ငံ တိုင်းမှ ပြည်သူ များသည် လွတ်လွတ် လပ်လပ် ၊ အေးအေး ဆေးဆေး ၊ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း နေ လိုကြ သည်။ မိမိတို့ နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတွင်မက တစ်ကမ္ဘာလုံး မည် သည့်နိုင်ငံ မှ ပြည်တွင်း ရော ၊ ပြည်ပပါ အပစ် အခတ် များ ၊ စစ်ပွဲများ လုံးဝမဖြစ်စေလိုကြ။ သို့သော် လည်း ဆန္ဒမပြည့် ၀ကြပါ။ အတ္တကြီး တယ်လို့ ပဲပြောပြော ၊ လိပ်မျိုး လို့ ပဲ ထင်ထင် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်တိုင်းပြည် ဘာမှမဖြစ်ရင် တော်သေး တာပေါ့။ အစိုးရ နဲ့ ပြည်သူတွေ မကြည်ဖြုကြ တော့ ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်။ ဆန္ဒပြကြ တယ်။ ရင်ဖွင့် တင်ပြကြ တယ်။ အစိုးရက ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို မလိုက်လျောပဲ ဆန့်ကျင်သူတွေကို“သူပုန်´´လို့ အမည်ပေးသတ်မှတ်ချေမှုန်းတော့ ပွဲက ပိုကြမ်းလာပြီး အနိဌာရုံအဖြစ်ဆိုးတွေ ကြုံတွေ့ လာကြ တယ်။ လောလောဆယ် ယနေ့ကမ္ဘာမှာ“ဆီးရီးယားနိုင်ငံ´မှ ပြည်တွင်းစစ်က ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါ ရီလမှာ (၂) နှစ်နီးပါ ကြာရှည်ပြီး ပြည်သူတွေ (၆၀၀၀၀)ကျော် သေကြေပျက်စီးကာ အကျည်း တန်ဆုံး ၊ အရုပ်ဆိုးဆုံးဘွဲ့ ထူးကြီးကို ပြိုင်ဘက်မရှိ ဆွတ်ခူးရယူနေသလို ၊ အတုယူအားကျတဲ့ နိုင်ငံတစ်ချို့ လည်းရှိတယ်။
သုတေသနပြုချက်အရ စောစီးစွာပညာသင်ကြားရေးကို မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေမှာ နောက်ပိုင်း အကြမ်းဖက် ပြဿနာတွေ ကျူးလွန် လာကြကြောင်း တွေ့ရတယ်။ လူငယ်တွေကို ပြုစု ပျိုးထောင် ရေးမှာ အရေး အကြီး ဆုံးကတော့ ကိုယ်ချင်း စာပြီး “မျှဝေ ခံစား ကြည့်ခြင်း” ဖြစ်တယ်။ မျှဝေ ခံစားတယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သူတို့ အတွေး အမြင်ကို လက်ခံခြင်း နဲ့ သူတို့ ဖော်ထုတ် ချက်ကို စိတ်ဝင်စားစွာ နားထောင်ပေးခြင်းတို့လည်းပါဝင်တယ်။ သူတို့ကို မျှဝေ ခံစား ပေးတာဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်လိုစိတ်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်၊ ပြဿနာ တွေကို ဖြေရှင်း ပေးနိုင်မယ်၊ ဒေါသတွေကို တားဆီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်။
ထိုင်း လုပ်ငန်းရှင် လင်းမယား ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံထားရသည့် အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ် ကရင် အမျိုး သမီး ငယ်ကို ထိုင်း အစိုးရက ကုန်ကျစရိတ် တာဝန်ယူပြီး ဆေးဝါး ကုသပေးမည်ဟု သိရှိရသည်။
လူဦး​ရေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း​ မိုဘိုင်း​ဖုန်း​ ကိုင်နိုင်မယ် ဆိုတာ တကယ်ဖြစ်လာမှာလား​
အခုတ​လော ပြည်တွင်း​မှာ ပြည်သူ​တွေ စိတ် အဝင် စား​ဆုံး​ သတင်း​ က​တော့​ မိုဘိုင်း​ဖုန်း​ တွေနဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ သတင်း​ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်း​ဖုန်း​ တပ်ဆင်​ရေး​ ပြဿနာနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ဆက်သွယ်​ရေး​ဝန်ကြီး​ဟောင်း​ကို စစ်​ဆေး​နေတယ်။ ဆက်သွယ်​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာနက အကြီး​တန်း​အရာရှိ​တွေကို တရား​စွဲထား​တယ်။ သူတို့​နဲ့​ အတူလုပ်ကိုင်​နေတဲ့​ ခရိုနီ​တွေပိုင် ကုမ္ပဏီ​တွေကို ​ခေါ်ယူစစ်​ဆေး​နေတယ်။ လာမယ့်​ ဧပြီလဆန်း​ဆိုရင် ပြည်သူ​တွေ ဝမ်း​သာ​စေမယ့်​ ​ဈေး​နှုန်း​နဲ့​ မိုဘိုင်း​ဖုန်း​ ဆင်း​ကတ်​တွေ ​ရောင်း​ပေး​တော့​မယ် စတဲ့​ သတင်း​တွေအား​လုံး​ ပြည်သူ​တွေ စိတ်ဝင်စား​ကြပါတယ်။
"NLD ဆိုတာ ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်တော့ဘူး.. အခု မွတ်ဒေါင်း...
အင်တာနက် ဘလော့များပ်ါတွင် ရေးသားထားသော ဦးသန်းရွှေ၊ ...
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပိုင် ပြတိုက်များ ရက်တိုးမြှင့်...
Eleven, The Voice,7Day, ဧရာဝတီ ကဲ့သို့ ကျင့်ဝတ်မ...
ပါတီဝင်အချင်းချင်း ကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှ ကျင်းပရန်ြ...
ရန်ကြီးအောင်မှန်လုံလေအိတ် EXPRESS အမြန်ယာဉ်ကားချော...
သဘာဝအတိုင်း အစိမ်းစားခြင်းဖြင့် ကျန်းမာ နုပျိုစေမည...
Android လိုပဲ ကွန်ပြူတာမှာကစားလို့ရတဲ့ သစ်သီးဖြတ်တ...
ပြန်ကြားရေး ဒုတယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် နှင့် Google မှ ...
အကျိုးဆောင်တွေ သိမ်းထားတဲ့ ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွ...
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း မူးယစ် ဆေးဝါး သယ်ဆောင်သူ အမျိုး သမ...
ကရင်မိန်းကလေးငယ် ဆေးကုစရိတ် ထိုင်းအစိုးရ တာဝန်ယူမည...
လူဦး​ရေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း​ မိုဘိုင်း​ဖုန်း​ ကိုင်နိ...